Ungazihlanza Kanjani Izindebe Zokuya Esikhathini: Izeluleko Eziyi-17 Zasekhaya, Amathoyilethi Omphakathi, Okuningi
FR : https://www.hebergementwebs.com/sante/comment-nettoyer-les-coupes-menstruelles-17-conseils-pour-la-maison-les-toilettes-publiques-plus
EN : https://www.hebergementwebs.com/health/how-to-clean-menstrual-cups-17-tips-for-home-public-toilets-more
ES : https://www.hebergementwebs.com/salud/como-limpiar-las-copas-menstruales-17-consejos-para-el-hogar-los-banos-publicos-y-mas
ET : https://www.hebergementwebs.com/tervis/kuidas-koristada-menstruaaltsukleid-17-napunaiteid-kodu-avalike-tualettruumide-jaoks
AF : https://www.hebergementwebs.com/gesondheid/hoe-om-menstruasie-bekers-17-wenke-vir-huis-openbare-toilette-meer-skoon-te-maak
ID : https://www.hebergementwebs.com/kesehatan/cara-membersihkan-gelas-menstruasi-17-tips-untuk-toilet-rumah-umum-lebih
CO : https://www.hebergementwebs.com/salute/cumu-per-pulisce-e-tazze-menstruali-17-cunsiglii-per-i-bagni-publichi-in-casa
BG : https://www.hebergementwebs.com/Здраве/как-да-почистите-менструалните-чаши-17-съвети-за-дома-обществени-тоалетни-още
CY : https://www.hebergementwebs.com/iechyd/sut-i-lanhau-menstrual-cup-17-tips-for-home-public-toilets-more
BE : https://www.hebergementwebs.com/Здароўе/як-пачысціць-менструальныя-кубкі-17-парады-для-дома-грамадскіх-прыбіральняў-больш
BS : https://www.hebergementwebs.com/zdravlje/kako-ocistiti-menstrualne-salice-17-savjeta-za-kucu-javne-toalete-vise
CS : https://www.hebergementwebs.com/zdraví/jak-cistit-menstruacni-kalisky-17-tipu-pro-domaci-verejne-toalety-vice
HU : https://www.hebergementwebs.com/egészség/hogyan-kell-megtisztitani-a-menstruacios-cseszeket-17-tippeket-otthoni-nyilvanos-wc-khez
GL : https://www.hebergementwebs.com/saúde/como-limpar-vasos-menstruais-17-consellos-para-aseos-publicos-caseiros-mais
GU : https://www.hebergementwebs.com/આરોગ્ય/કેવી-રીતે-સાફ-માસિક-કપ-17-ટિપ્સ-માટે-ઘર-જાહેર-શૌચાલય-વધુ
EO : https://www.hebergementwebs.com/sano/kiel-purigi-menstruajn-tasojn-17-konsiletojn-por-hejm-publikajn-necesejojn-pli
DA : https://www.hebergementwebs.com/sundhed/hvordan-man-rengør-menstruationskopper-17-tip-til-hjemmet-offentlige-toiletter-mere
FA : https://www.hebergementwebs.com/سلامتی/نحوه-تمیز-کردن-فنجان-های-قاعدگی-17-نکته-برای-توالت-های-عمومی-بیشتر
BN : https://www.hebergementwebs.com/স্বাস্থ্য/হাউস-পাবলিক-টয়লেট-এর-জন্য-কী-পরিষ্কার-মাসিক-কাপ-17-টিপস
AR : https://www.hebergementwebs.com/صحة/كيفية-تنظيف-كؤوس-الحيض-17-نصائح-للمراحيض-المنزلية-العامة-المزيد
HR : https://www.hebergementwebs.com/zdravlje/kako-ocistiti-menstrualne-salice-17-savjeta-za-kucu-javne-toalete-vise
CA : https://www.hebergementwebs.com/salut/com-netejar-les-tasses-menstruals-17-consells-per-lavabos-publics-a-casa-mes
EL : https://www.hebergementwebs.com/Υγεία/πώς-να-καθαρίσετε-κύπελλα-εμμήνου-ρύσεως-17-συμβουλές-για-σπίτι-δημόσιες-τουαλέτες-περισσότερα
HT : https://www.hebergementwebs.com/sante/kijan-pou-netwaye-reg-tas-17-konsey-pou-kay-piblik-twalet-plis
DE : https://www.hebergementwebs.com/gesundheit/wie-man-menstruationstassen-reinigen-17-tipps-fur-offentliche-wc-zu-hause-mehr
FY : https://www.hebergementwebs.com/sûnens/hoe-om-menstruaasjekoppen-17-tips-foar-thus-iepenbiere-toiletten-mear-skjin-te-meitsjen
EU : https://www.hebergementwebs.com/osasuna/nola-garbitu-hilekoaren-edalontziak-17-aholku-etxeko-komun-publikoetarako-gehiago
GA : https://www.hebergementwebs.com/sláinte/conas-le-glanadh-menstrual-cupain-17-tips-for-home-public-leithris-nios-mo
HE : https://www.hebergementwebs.com/בְּרִיאוּת/איך-לנקות-כוסות-מחזור-17-טיפים-לבית-שירותים-ציבוריים-יותר
AM : https://www.hebergementwebs.com/ጤና/እንዴት-የወር-አበባ-ኩባያዎችን-ለማፅዳት-17-ምክሮች-ለቤት-ህዝብ-መፀዳጃ-ቤቶች-የበለጠ
GD : https://www.hebergementwebs.com/slàinte/ciamar-gu-glan-menstrual-cupannan-17-tips-for-home-public-toilets-more
HA : https://www.hebergementwebs.com/lafiya/yadda-za-a-tsaftace-kogin-haila-17-shawarwari-don-gidan-jama-a-bayan-gida-mafi
AZ : https://www.hebergementwebs.com/sağlamlıq/ev-ictimai-tualetlər-ucun-menstruasiya-fincanlari-17-tovsiyələr-necə-təmizlənir
LB : https://www.hebergementwebs.com/gesondheet/wei-ze-botzen-menstrual-coupe-17-tipps-fir-heem-effentlech-toiletten-mei
IT : https://www.hebergementwebs.com/salute/come-pulire-coppette-mestruali-17-consigli-per-i-bagni-pubblici-di-casa-more
RW : https://www.hebergementwebs.com/ubuzima/nigute-gusukura-imihango-ibikombe-17-inama-murugo-rusange-ubwiherero-byinshi
ML : https://www.hebergementwebs.com/ആരോഗ്യം/എങ്ങനെ-വൃത്തിയാക്കേണ്ടത്-ആർത്തവ-കപ്പുകൾ-17-ടിപ്പുകൾ-വീട്ടിൽ-പൊതു-ടോയ്‌ലറ്റുകൾ-കൂടുതൽ
IS : https://www.hebergementwebs.com/heilsa/hvernig-að-þrifa-tiða-bolla-17-rað-fyrir-heimilissalerni-meira
NL : https://www.hebergementwebs.com/gezondheid/hoe-menstruatiecups-reinigen-17-tips-voor-thuis-openbare-toiletten-meer
KA : https://www.hebergementwebs.com/ჯანმრთელობა/როგორ-უნდა-გაიწმინდოთ-მენსტრუალური-თასები-17-რჩევა-სახლის-საზოგადოებრივი-ტუალეტებისთვის
PT : https://www.hebergementwebs.com/saúde/como-limpar-copos-menstrual-17-dicas-para-casa-banheiros-publicos-mais
PL : https://www.hebergementwebs.com/zdrowie/jak-czyscic-kubeczki-miesiaczkowe-17-wskazowek-do-domu-toalety-publiczne-wiecej
RU : https://www.hebergementwebs.com/Здоровье/как-чистить-менструальные-чаши-17-советов-по-дому-общественные-туалеты-другое
KO : https://www.hebergementwebs.com/건강/청소-방법-월경-컵-17-팁-집-공공-화장실-더
IG : https://www.hebergementwebs.com/ahụike/isi-edozi-isi-uto-iko-17-atụmatụ-maka-ulo-ọha-ụlọ-mposi-ọzọ
RO : https://www.hebergementwebs.com/sănătate/cum-sa-curațam-cupele-menstruale-17-sfaturi-pentru-toaleta-public-acasa-mai-mult
MT : https://www.hebergementwebs.com/saħħa/kif-tnaddaf-tazzi-mestrwali-17-ponot-ghat-tojlits-pubblici-tad-dar-aktar
LV : https://www.hebergementwebs.com/veselība/ka-tirit-menstruaciju-kausus-17-padomus-majas-sabiedriskajam-tualetem-vairak
NY : https://www.hebergementwebs.com/thanzi/momwe-kuyeretsa-kusamba-makapu-17-maupangiri-akunyumba-pagulu-zimbudzi-zambiri
NO : https://www.hebergementwebs.com/helse/hvordan-rengjør-menstruasjonskopper-17-tips-for-hjemmet-offentlige-toaletter-mer
MS : https://www.hebergementwebs.com/kesihatan/cara-membersihkan-haid-cawan-17-petua-untuk-rumah-awam-tandas-banyak-lagi
MY : https://www.hebergementwebs.com/ကျန်းမာရေး/ဘယ်လိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း-ရာသီလာခြင်း-ခွက်များ-၁၇-အကြံပြုချက်များ-အတွက်-အိမ်-လူထု-အိမ်သာ-ပိုပြီး
MR : https://www.hebergementwebs.com/आरोग्य/घर-सार्वजनिक-स्वच्छतागृहांसाठी-कसे-स्वच्छ-मासिक-कप-17-टिप्स
JA : https://www.hebergementwebs.com/健康/how-to-clean-menstrual-cups-17-tips-for-home-public-toilets-more
SI : https://www.hebergementwebs.com/සෞඛ්‍යය/කෙසේද-පිරිසිදු-ඔසප්-කෝප්ප-17-ඉඟි-ගෙදර-පොදු-වැසිකිළි-තවත්
PA : https://www.hebergementwebs.com/ਸਿਹਤ/ਘਰ-ਜਨਤਕ-ਪਖਾਨਿਆਂ-ਲਈ-ਕਿਵੇਂ-ਸਾਫ-ਮਾਹਵਾਰੀ-ਕੱਪ-17-ਸੁਝਾਅ
OR : https://www.hebergementwebs.com/ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ/କିପରି-ପରିଷ୍କାର-ମାସିକ-କପ୍-17-ଟିପ୍ସ-ଘର-ସର୍ବସାଧାରଣ-ଶ-ets-ଚାଳୟ-ଅଧିକ-|
PS : https://www.hebergementwebs.com/روغتیا/د-کور-عامه-تشنابونو-لپاره-نور-د-څرنګوالي-څخه-پاک-د-میاشتنۍ-جامې-17-لارښوونې
KN : https://www.hebergementwebs.com/ಆರೋಗ್ಯ/ಹೇಗೆ-ಸ್ವಚ್-clean-ಗೊಳಿಸುವುದು-ಮುಟ್ಟಿನ-ಕಪ್ಗಳು-17-ಸಲಹೆಗಳು-ಮನೆ-ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಶೌಚಾಲಯ-ಹೆಚ್ಚು
LT : https://www.hebergementwebs.com/sveikata/kaip-isvalyti-menstruacinius-puodelius-17-patarimu-namuose-viesuose-tualetuose-daugiau
SD : https://www.hebergementwebs.com/صحت/ڪيئن-صاف-حيض-کپ-17-طريقا-گهر-سرڪاري-ٽوائلٽ-وڌيڪ
MN : https://www.hebergementwebs.com/Эрүүл-мэнд/Гэрийн-нийтийн-жорлонд-зориулсан-сарын-тэмдгийн-аяга-17-зөвлөмжийг-хэрхэн-яаж-цэвэрлэх-талаар
KY : https://www.hebergementwebs.com/Ден-соолук/үй-коомдук-ажатканалар-үчүн-этек-кир-чыны-17-кеңешти-кантип-тазалоо-керек
KK : https://www.hebergementwebs.com/Денсаулық/үйдегі-қоғамдық-дәретханаларға-арналған-етеккір-шыныаяқтарын-17-кеңестерді-қалай-тазартуға-болады
VI : https://www.hebergementwebs.com/sức-khỏe/how-to-clean-kinh-cup-17-tip-for-home-public-toilet-more
SW : https://www.hebergementwebs.com/afya/jinsi-ya-kusafisha-vikombe-vya-hedhi-17-vidokezo-vya-nyumbani-vyoo-vya-umma-zaidi
SV : https://www.hebergementwebs.com/hälsa/hur-man-rengor-menstruationskoppar-17-tips-for-hem-offentliga-toaletter-mer
TT : https://www.hebergementwebs.com/Сәламәтлек/ничек-чистартырга-менструаль-чынаяклар-17-киңәшләр-өй-җәмәгать-бәдрәфләр-күбрәк
ZH-TW : https://www.hebergementwebs.com/健康/如何清潔月經杯-家庭公共廁所的-17-個提示更多
TH : https://www.hebergementwebs.com/สุขภาพ/how-to-clean-menstrual-cups-17-tips-for-home-public-toilets-more
XH : https://www.hebergementwebs.com/impilo/njani-ukucoca-ukuya-ekomityini-kweekomityi-17-iingcebiso-zekhaya-zikawonke-wonke-izindlu-zangasese-ngakumbi
SQ : https://www.hebergementwebs.com/shëndeti/si-per-pastruar-gota-menstruacione-17-keshilla-per-ne-banje-publike-me-shume
SO : https://www.hebergementwebs.com/caafimaadka/sida-loo-nadiifiyo-caadada-koobabka-17-talooyin-ee-guryaha-dadweynaha-musqulaha-badan
TK : https://www.hebergementwebs.com/saglyk/nadip-arassalamaly-aybasy-kaseler-17-maslahat-oy-kopculik-hajathana-kop
SL : https://www.hebergementwebs.com/zdravje/kako-ocistiti-menstrualne-skodelice-17-nasveti-za-dom-javna-stranisca-vec
YO : https://www.hebergementwebs.com/ilera/bawo-lati-mọ-agolo-oṣu-17-awọn-imọran-fun-ile-ile-ile-igbọnsẹ-diẹ-sii
ST : https://www.hebergementwebs.com/bophelo-bo-botle/joang-ho-hloekisa-ho-ea-matsatsing-linoelo-17-malebela-bakeng-sa-ntlo-sechaba-matloana-ho-feta
UR : https://www.hebergementwebs.com/صحت/ماہواری-کے-کپ-کیسے-صاف-گھر-عوامی-بیت-الخلاء-کے-لئے-مزید-17-نکات
YI : https://www.hebergementwebs.com/געזונט/ווי-צו-ריין-מענסטרואַל-טעפּלעך-17-עצות-פֿאַר-היים-ציבור-טוילאַץ-מער
TE : https://www.hebergementwebs.com/ఆరోగ్యం/హౌ-టు-క్లీన్-stru-తు-కప్పులు-17-చిట్కాలు-ఇంటి-పబ్లిక్-టాయిలెట్స్-మరిన్ని
UZ : https://www.hebergementwebs.com/sog'liqni-saqlash/uydagi-jamoat-hojatxonalari-uchun-hayz-ko-rish-stakanlarini-17-maslahatlarni-qanday-tozalash-kerak-batafsilroq
TG : https://www.hebergementwebs.com/Тандурустӣ/пиёлаҳои-ҳайз-17-маслиҳатҳо-барои-ҳоҷатхонаҳои-ҷамъиятӣ-чӣ-гуна-тоза-карда-мешаванд
Ngakho-ke unqume ukusebenzisa inkomishi yokuya esikhathini esikhathini sakho. Ukukhetha okuhle!
Ngaphambi kokuthi uqale, kunezinto ezimbalwa okufanele uzikhumbule. Isihloko: Njengoba izinkomishi zokuya esikhathini ziphinde zisebenze, uzofuna ukuzilungiselela amasu amahle kakhulu wokuhlanza nokugcina inkomishi yakho.
Ongakwazi futhi ongakwazi ukukusebenzisa
Sebenzisa insipho emnene, engenamanzi futhi engenawo uwoyela ukugcina inkomishi yakho yokuya esikhathini.
Ngakolunye uhlangothi, kunezinto ezimbalwa okufanele uzigweme.
Imikhiqizo eminingi yokuhlanza ejwayelekile ingadala ukucasuka okukhulu uma isetshenziswa kumug wakho wakho.
Gwema lokhu okulandelayo: >
uketshezi lokuwasha izitsha
Ukuhlanza kwasekuqaleni (ngaphambi kokusetshenziswa kokuqala)
Ukuhalalisela ukuthengwa kwenkomishi yokuya esikhathini! Uzofuna ukulungisa umug ngaphambi kokusebenzisa kwakho kokuqala. Qala ngokugeza izandla zombili nenkomishi ngesihlanza esimnene, esingenamanzi.
Okulandelayo: Bilisa ibhodwe lamanzi bese uvumela inkomishi ihlale emanzini abilayo imizuzu engafinyelela kweyishumi.
Qiniseka ukuthi ubuka imug ukuze inganamatheli phansi ebhodweni futhi ishe.
Ukuhlanza nsuku zonke
Uma usuyilungisile ngempumelelo inkomishi yakho yokuya esikhathini, uzofuna nokuyigcina ihlanzekile nsuku zonke ngemuva kokuyisebenzisa.
Ukuhlanza imagi kususa amabhaktheriya nokwakha, futhi kuvimbela amabala nephunga.
Akunandaba ukuthi ukuphi, uzohlala ufuna ukugeza izandla zakho ngaphambi nangemva kokufaka inkomishi. >
Susa inkomishi bese ufafaza igazi endlini yangasese.
Bese ugeza ngamanzi ahlanzekile bese usebenzisa insipho emnene-engenamakha ukuhlanza ngokushesha.
Uma sekuhlanzekile, ungafaka inkomishi kabusha.
Endaweni yokugezela esesidlangalaleni
Uma usohambweni ngesikhathi sakho, kungaba nzima kakhulu ukugeza inkomishi yakho.
Uma ungakwazi ukuhlanza inkomishi bese usebenzisa okokuhlanza okuphephile, susa bese ukhipha inkomishi njengenjwayelo.
Okulandelayo, esikhundleni sokuhlanza, sebenzisa isiqeshana sephepha langasese ukusula inkomishi, uqiniseke ukuthi ususa noma yiziphi izicucu zezicubu.
Faka futhi umug bese uqhubeka nosuku lwakho.
Khumbula ukugeza nokuhlanza kahle uma ufika ekhaya.
Ngenkathi usohambweni noma endle
Kwezinye izikhathi ungahle ungabi sendaweni lapho ukutholakala kwamanzi kuphephe khona.
Kulokhu, letha amanzi asemabhodleleninawe ukugeza inkomishi yokuya esikhathini.
Uzophinda ufune ukupakisha uhlobo lokuhamba olungenawo uwoyela nolunephunga oluthandayo. insipho.
Uma uhamba izintaba noma ukanisa, thela igazi emgodini (umgodi omncane emhlabathini) njengoba ubungenza noma iyiphi enye imfucuza ephilayo.
Bese usebenzisa amanzi asemabhodleleni amanzi ukugeza inkomishi bese uyisula ngendwangu ehlanzekile ngaphambi kokuyifaka kabusha.
Khumbula ukupakisha isikhwama sakho sokugcina ukuze uqiniseke ukuthi umug uhlala uhlanzekile uma ungasetshenziswa.
Ukubulala amagciwane ekupheleni kwesikhathi sakho
Ukuze ukhiphe igciwane enkomishini ngemuva kwesikhathi sakho, yigeze kahle, bese uyibilisa imizuzu embalwa .
Uma imagi isibilisile, yibeke eceleni ukuze ipholise ngokuphelele futhi yomile.
Eminye imikhiqizo ithengisa izinkomishi ezibulala amagciwane ezingagcwaliswa ngamanzi, zifakwe ku-microwavenenkomishi yokuya esikhathini ngaphakathi bese ibilisiwe imizuzu engu-3-4.
Zombili izinqubo zibulala wonke amabhaktheriya ukuvikela ukukhula kwamagciwane ngaphambi kokusetshenziswa okulandelayo.
Ungagcina kanjani uma ungasetshenziswa
The most mugs come nesikhwama noma isikhwama sokugcina lapho ungasebenzisi imug.
Uma okwakho kunganikezelwanga, ungasebenzisa noma yisiphi isikhwama esiphefumulekayo. Ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uyayivikela imug ekungcoleni nakwamagciwane, kepha ukuthi kusenokusakazwa komoya okuningi.
Gcina isikhwama endaweni epholile, eyomile (njengekhabethe leze) lapho imug ingoma kahle ngaphambi kokusebenzisa okulandelayo.
Umehluko phakathi kokuhlanza nokubulala amagciwane
Ukuhlanzwa kwansuku zonke kwenkomishi kuphela kususa ingxenye yobuso amabhaktheriya, iphunga nokuqongelela.
Noma kunjalo, i-stukususwa kususa ngokuphelele amagciwane futhi kulungisa inkomishi ezobekelwa ukusetshenziswa okulandelayo. …
Ukunakekela indebe yakho yokuya esikhathini kungahle kungabi mnyama futhi kumhlophe njalo. Nazi ezinye zezimo ezingase zivele. Kepha uma ubona ukuthi inkomishi yakho isiqala ukunuka umuncu, kunezinto ezimbalwa ongazenza. Okokuqala, phawula ukuthi uwugqoka kangakanani umug wakho. Uma uyigqoka isikhathi eside kakhulu, ingakhuphula ubungozi bokuba nephunga. Kungcono ukuyiguqula njalo emahoreni angu-4-8, uma kungenzeka. Ungalokothi uyigqoke ngaphezu kwehora eli-1 2. Lapho uhlanza inkomishi ngemuva kokuyisebenzisa ngakunye, yigeze kuqala ngokushaya amanzi abandayo. Amanzi ashisayo angabamba iphunga. Bese uthatha isixubho esingasetshenziswangaukukhuza kahle inkomishi.
Ekugcineni, qiniseka ukuthi uhlanza indebe yakho emva kwesikhathi ngasinye. Lokhu kuzosiza ukuvimbela iphunga ekucabangenini ekuhambeni kwesikhathi.
Imug inombala omnyama noma amabala
Ukushintshwa kombala okuncane kungenzeka kwenzeke ngokuhamba kwesikhathi.
Okunye ukukhipha umbala kungavinjelwa ngokukhipha amagciwane okujulile ngaphambi nangemva kwesikhathi ngasinye nokuhlanzwa okujulile okuqhubekayo.
Ngokuqondene nokugwema iphunga, ungasebenzisa futhi isixubho esihlanzekile ukususa amabala lapho uhlanza nsuku zonke.
Uma ubona ukushintsha kombala ngokweqile, sekuyisikhathi senkomishi entsha. Mane usebenzise kabusha noma ulahle imug yakho endala bese uyishintsha ufake entsha.
Imug inezinsalela ezimhlophe
Uma ubona ifilimu emhlophe ngemuva kokubilisa imug yakho, ungakhathazeki. Lokhu kuvamile ngokuphelele.
Izinsalela ezimhlophe zivela emanzini anzima kwezinyeezifundeni. Mane nje uhlanze izinsalela ngaphambi kokufaka inkomishi.
Inkomishi iwele ethoyilethi
Noma ngabe yini oyenzayo, ungayifaki okwamanje.
Uma iwela emanzini ahlanzekile endlu yangasese endlini yangasese yendlu yakho, maningi amathuba okuthi uzobe ulungile ngemuva kokuhlanza inkomishi emanzini abilayo.
Kepha uma ubeke inkomishi endlini yangasese yomphakathi, noma kukhona ipee noma indle endlini yangasese, ungahle uthande ukuyisusa ngokuphelele inkomishi.
Ukuvala inzalo ekhaya kungahle kunganele ukubulala amagciwane kulezi zimo.
Kwenzekani uma kungahlanzwa kahle
Uma ungayihlanzanga kahle ikomishi lakho, amagciwane, iphunga, amabala nokuguguleka kungenzeka. > Lokhu kusho nokuthi inkomishi yakho izodingaKufanele ithathelwe indawo kaningi.
Ngakho-ke kuyanconywa ukuthi ulandele ukuhlanza kwakho kwansuku zonke kanye nokuvala inzalo njalo ngenyanga.
Okufanele ukwenze uma uba nokutheleleka ngesikhathi nangemva kokusebenzisa i-
Uma uthuthukisa noma yiluphi uhlobo lokutheleleka ngesikhathi sokusebenzisa, yeka ngokushesha ukusebenzisa inkomishi bese uthintana nodokotela noma uchwepheshe ofanayo wezokunakekelwa kwempilo.
Bazokwazi ukunquma izinyathelo ezihamba phambili zokuya phambili.
Izimpawu zokutheleleka zifaka phakathi:
Ubuhlungu besitho sangasese sowesifazane noma ukuqina okushisayo ngesikhathi sokuchama noma kocansi
iphunga elibi elivela esithweni sangasese izifo ezithinta imvubelo kanye negciwane kungalashwa. Khumbula ukufaka enye inkomishi ngaphambi kwesikhathi sakho esilandelayo.
Uma ukwazi ukugcina ukuhlanzwa kwansuku zonke ngesikhathi sakho, kanye nokuvala inzalo nyangazonke, inkomishi yakho izohlala i-en isimo esiphelele.
Kepha uma uthola ukuthi ukunakekelwa kubaluleke kakhulu, lokhu kungenzeka kungabi yindlela yakho. Kuneminye imikhiqizo eminingi yamavini okufanele uyihlole, kufaka phakathi ama- tampons, napkins sanitary
nezingubo zangaphansi zokuya esikhathini